Qalabka dhismaha ee gaarka loo leeyahay ayaa yimaada barnaamijka Snapchat | Wararka IPhone
El heerka cusbooneysiinta Snapchat ayaa la kulmaya runti waa sarreysaa. Intaa waxaa sii dheer, kuwa jecel barnaamijka, cusbooneysiintani kaliya ma aha inay xalliyaan dhibaatooyinka ama hagaajiyaan waxqabadka barnaamijka laakiin sidoo kale waxaa ku jira war aad u xiiso badan, wax aysan shirkaddu qaban tan iyo markii la aasaasay.
Runtu waxay tahay in hawsha ugu dambeysa ee ay daabacdo Snapchat loo yaqaan Khariidad, taas oo aan ku arki karno halka uu ku sugan yahay mid kasta oo ka mid ah asxaabteena oo aan arki karno, markaan ku wareegeyno khariidada, sheekooyinka kala duwan ee adduunka oo dhan (waxaad si fudud u arki kartaa halka ay ku yaalliin barar badan adoo adeegsanaya lambar midab leh).
Isku dayga ba'an ee Snapchat ee ah inuu noolaado
Cusboonaysiinta ugu dambaysa waa nooca 10.11.5 taas oo aan si rasmi ah uga heli karno shaqadan cusub ee soo socota ee aan kuugu sheegay safafki hore:
Farahaaga ku fogee si aad u aragto Khariidadda!
Eeg waxa ka dhacaya adduunka oo raadso saaxiibbadaada. Waad dooran kartaa inaad la wadaagto goobtaada asxaabtaada ama aadan ka muuqan khariidada qaabka cirfiidka.
Qalabkani waa nooc ka mid ah Raadinta saaxiibaday ee Apple kaas oo aan ku heli karno asxaabteena (oo leh Snapchat, dabcan) kuwaas oo u oggolaaday inay nala wadaagaan meeshooda. Intaas waxaa sii dheer, haddii aan ku wareegeyno qaybaha kala duwan ee adduunka waan arki karnaa sheekooyinka kala duwan ee lagu wada daabacay hal meel. Sidaa darteed, waxaan arki karnaa, tusaale ahaan, wax walba oo ku saabsan bixinta Oscar ama dhinacyada magaalada x in hal mar la wada qaado.
Laakiin wax walba halkaas kuma eka, sheeko cusub ayaa timid Snapchat iyada oo aan lagu xusin wararka cusbooneysiinta: abuurka geofiltarka arjiga. Waa wax laga xumaado in shaqadan kaliya laga heli karo Mareykanka tan iyo markii isticmaaleyaal badan oo Isbaanish ah ay rabaan inay yeeshaan qalabkan si ay snapchat-kooda ugu siiyaan kala duwanaansho iyo madadaalo badan.
Isticmaalayaasha ayaa abuuri kara joornaaladaas waxayna ku dabaqi karaan 1 saac illaa 90 maalmood. Dabcan, waxay leedahay qiimo uu qeexay Snapchat oo ka bilaabanaya 6 Dollar wayna sii kordheysaa iyadoo kuxiran waqtiga geofilterku ku sii jiro khadka tooska ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Snapchat wuxuu isku dayaa inuu ku hagaajiyo xogtiisa cusbooneysiinta cusub